Nuu qunnamaa - Cloud Library
‹ Garaa manee hikaa afaan Ingiliffaa deemnaa
Afaan ammaa: Afaan Oromoo
Multaa kana degaarii
Kitaaba jireenya afuura ilmaan nama jijiruu kanaa adunyaa mara irratti akka facaa’uu yoo nibarbaadaa ta’ee karaa getinvolved@cloudlibrary.org email nuuf godhi.
Odefannooni cloud library bu’ura odefannoo siif kenname dha! Bali’naan akkasumas intarneeta irrattis akka atti bittinneessuu dandeessu fi itti dabalataan ammoo kutaalee adda addaa keessa filate itti fayyadamuu akka dandeessu akkasumas odefannoo kanaa namoota biroo waliin akka walii qoodni itti fayyadamitaanf isiin jajjabeessu barbaanna. Vidiyooniif odeffanoon sagaleen warrabmee kunneen youtube fi tudou, youku akkasumas midiyaalee adda addaa irratti fayyadamuu akka dandeessaanittif itti dabalataan ammoo Cloudlibrary.org website irratti fayyadamuufi bilisummaan sitti haa dhaga’amu. Odefannoo kanaa afaanota isaaniin yoo argatan itti ebbifamu danda’u jette yaaduu namoota waldaa kee keessa jiraaniif akkasumas barattoota wangeela fi gaggeessitoota waldaaf karaa e Books jiraaniif ykn email goodhiif.